Sida loo sameeyo liistada hoos-u-dhigga ah ee 'Excel' fudud oo dhakhso leh - Tilmaamaha Teknolojiyada | Golaha Moobaylka
Haddii aan ka hadalno xaashiyaha, waa inaan ka hadalnaa Excel, oo ah codsi suuqa ku dhacay 1985, laakiin ma noqonin tixraac suuqa illaa 1993, markii uu ka sarreeyay awoodda weyn ee Lotus-1-2-3. Maanta Excel waa si wada jir ah oo aan kala sooc lahayn loogu dhex daray Office 365.
Sanadihii la soo dhaafay, Excel ayaa kaliya soo hagaagtay, iyadoo siineysa tiro xalal badan, xalka shirkadaha iyo shaqsiyaadka labadaba. Mid ka mid ah howlaha ay na siiso, adeegsadayaasha iyo shirkadaha labadaba, waa suurtagalnimada samee liisaska hoos u dhigista, shaqo aad u faa'iido badan oo aan wax ku barno xiga.
Excel ayaa loo heli karaa labadaba Windows iyo macOS iyo iyada oo loo marayo Webka, noocyo buuxa. In kasta oo ay run tahay inaan hayno nooc loo heli karo aaladaha mobilada, tan sidaa uma dhameystirna sida midka aan ka heli karno noocyada desktop-ka. Tallaabooyinka la raacayo si loo abuuro liistada hoos-u-dhaca ee 'Excel' waa isku mid Windows, macOS iyo noocyada Webka.
Inkasta oo iyaga kaliya lagu abuuri karo iyada oo loo marayo noocyada desktop-ka ee 'Excel', kuwan waa lagala tashan karaa oo lala falgeli karaa nooc kasta oo Excel ah, oo ay ku jiraan nooca la dhimay ee Microsoft ay noogu soo gudbiso dalabka Xafiiska ee qalabka mobilada, codsi gebi ahaanba bilaash ah.
1 Waa maxay liisaska hoos-ku-qoran
2 Sida loo abuuro liisaska hoos loo dhigo ee 'Excel'
2.1 Abuur ilaha xogta
2.2 Abuur liiska hoos-hoos
Waa maxay liisaska hoos-ku-qoran
Liisaska hoos-u-dhaca, ayaa noo oggolaanaya ka xulo liistada xulashooyinka kaliya hal ikhtiyaar, marka laga reebo inta kale. Liiska noocan ahi wuxuu noo oggolaanayaa inaan isticmaalno qiyamka asalka ah ee ka fogaanshaha gelitaanka xogta khaldan ama qaladaadka higgaadinta (taas oo noo oggolaaneysa inaan fulino miirayaal gaar ah oo raadinta ah).
Shirkadaha, liisaskaani waxay kuu oggolaanayaan inaad abaabusho oo aad u maamusho hawlahaaga maalinlaha ah iyo maaraynta si wax ku ool ah oo wax ku ool ah, iyo sidoo kale inay bixiyaan taabasho xirfad leh oo aan waligood waxyeellayn. Tirada liisaska hoos-u-dhaca ah ee aan abuuri karno waa kuwo aan xad lahayn, sidaa darteed waxaan u abuuri karnaa sanduuqa liiska mid kasta oo ka mid ah unugyada ku yaal xaashi.
Liisaska noocan ahi aad ayey faa'iido u leeyihiin marka la samaynayo qaansheegta (halka fikrad kasta ay ka duwan tahay tii hore), raadinta booqashooyinka, sameyso xog-ururin si aad u dalbato miirayaasha gaarka ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno keydka bakhaarada ... Haddii aad gaartey maqaalkan, waxay u badan tahay inaad si cad uga muuqato waxtarka aad damacsan tahay inaad siiso shaqadan cajiibka ah ee Excel.
Sida loo abuuro liisaska hoos loo dhigo ee 'Excel'
Liisaska hoos-u-dhaca waxay ka helaan xogta miisaska ay tahay inaan horey u abuurnno si aan ugu isticmaalno il ahaan. Haddii ujeeddada xaashida aan dooneyno inaan ku abuurno liisaska hoos-u-dhaca ay tahay inaan daabacno, waa inaan deji isha xogta galka kale oo gooni ah, xaashi aan u wici karno Xog.
Sida aan kor uga faallooday, isla xaashida waxaan ku abuuri karnaa liisas hoos-u-dhac ah oo aan la koobi karayn, marka haddii aanaan rabin in loo sameeyo xaashi ilaha xog kasta, waxaan u isticmaali karnaa isla xaashida, iyada oo aan laga takhalusin xogta aan u adeegnay ilo ah liisaska aan horey u abuurnay. Markii aan si cad u ogaanno sida ay u shaqeeyaan, waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka la raacayo Samee liisaska hoos u dhaca ee 'Excel'.
Abuur ilaha xogta
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa abuurista ilaha xogta, xogta loo isticmaalo in lagu abuuro liisaska hoos-u-dhaca. Haddii aanan hore u abuurin xogtan, liiska hoos-u-dhaca ma heli doonaan wax ay muujiyaan. Si loo abuuro ilaha xogta, waxaan fureynaa warqad cusub oo Excel ah, laba jeer guji magaca waxaanna ugu magac daraynaa Xog.
Si aanan ugu lug yeelan taas oo ah ilaha xogta mid kasta oo ka mid ah liistada hoos-u-dhaca ah ee aan dooneyno inaan abuurno, waa inaan qornaa sida ugu horeysa u qiimeyso magaca liiska, ha ahaato magaalooyin, moodello, waddamo, dhar ... Haddii aan kaliya abuureyno liis, muhiim maahan in lagu qoro magaca qolka ugu horreeya.
Marka xigta, waa inaan qornaa dhammaan xulashooyinka aan dooneyno waxaa lagu muujiyaa liiska hoos-ka-dhacaya, mid ka hooseeya kan kale isla tiirarka si loo fududeeyo xulashada ilaha xogta. Markaan abuurno ilaha xogta, waxaan abuuri karnaa liistada hoos-u-dhaca.
Abuur liiska hoos-hoos
First of dhan waxaan doorannaa unugyada halka aan dooneyno in liistada hoos loo dhigo la soo bandhigo.
Marka xigta, dhagsii ikhtiyaarka Xogta (maahan xaashi) xarigga. Fursadaha dhexdooda, guji Xaqiijinta xogta.
Gudaha tabta qaabeynta> Shuruudaha ansaxinta> Noo ogolow inaan dooranno Lista.
Marka xigta waxaan tagnaa sanduuqa Asalka oo waxaan gujineynaa astaanta dhamaadka sanduuqa si xulo kala duwanaanta unugyada halka xogtu ku taal.
Marka xigta, dhagsii xaashida Xogta iyo waxaan dooranaa kaladuwanaanta unugyada halka xogtu ku taal, iyadoo laga tagayo magaca unuga noo ogolaaday inaan ogaanno xogtaan. Markaan dooranay kala duwanaanta xogta, waxaan riixnaa Gali.
Waxaan horeyba u abuurnay liistadayada hoos udhaca ugu horreeya ee ku yaal xaashida weyn ee 'Excel'. Dhammaan unugyada aan u xulanay inay muujiyaan liiska hoos-u-dhaca, fallaar hoos u socota ayaa hadda la soo bandhigay oo nagu casuumaya inaan riixno ka dooro dhammaan xulashooyinka in aan hore ugu dhidibnay xaashida Xogta.
Markaan abuurnay liiska hoos u dhaca ugu horreeya, waa inaan fuliyaan isla hawshaas si loo abuuro inta ka hartay liisaska hoos-u-dhaca ah ee aan rabno ama u baahan nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Microsoft Excel » Sida loo sameeyo liiska hoos u dhaca Excel